Accueil > Gazetin'ny nosy > Asan-dahalo : Asehoy ny maha jeneraly be galona anaraeo !
Asan-dahalo : Asehoy ny maha jeneraly be galona anaraeo !
Mbola mitàna ny sain’ny mpanara-baovao, ankehitiny, ny asan-dahalo niseho tao amin’ny fokontany telo (3) ao amin’ny distrikan’Iakora sy Midongy Atsimo, ny faran’ny herinandro lasa teo. Efa ho dimy (5) andro izao no niroso tamin’ny fikarohana ireo dahalo nanao ny fanafihana ny mpitandro filaminana, saingy hatramin’ny omaly alakamisy dia tsy mbola nisy voasambotra na maty voatifitra aza ny dahalo iray tamin’ireo 300 mahery nanafika na efa mampiasa helikôptera aza ny Zandarimariam-pirenena sy ny Tafika. Raha ny vaovao farany dia fantatra fa omby miisa 70 amin’ireo 1300 nangalarina no efa azo, izany hoe tsy ampy folo isan-jaton’ireo nalain’ny dahalo akory. Manoloana ity asan-dahalo mahatsiravina ity moa dia nilaza ny minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena fa tsy maintsy ho samborina ary hampiharana ny sazy mafy ireto dahalo nanafika tany Midongy Atsimo ireto izay raisina toy ny fahavalom-pirenena.
Tsihiavina ihany fa olona 19 no maty nandritra ny fanafihana, ny 17 no sivily tamin’ireo fokonolona nanao ny fanarahan-dia ary miaramila kosa ny roa. Manoloana izany indrindra dia andrasan’ny mpanara-baovao ny ho tohin’ity raharaha ity satria asan-dahalo tsy dia fahita firy teto amin’ny firenena izany hoe 300 lahy mahery manafika tanàna telo (3) indray miaraka izay nahaverezana omby manodidina 1300 isa. Ho hita eo moa ny tena fahaizan’ireo jeneraly be galona eto amintsika izay mirehareha fa nahavita fianarana tamin’ny sekoly avo lenta tany ampitandranomasina tany, voalohany amin’izany ny sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard izay manana ny laharam-boninahitra “général de corps d’armée”.
Raha ny lôjikia mantsy dia tsy tokony ho sarotra ho an’ny Tafika sy Zandariamariam-pirenena mihintsy ny miady amin’ireto dahalo ireto satria tsy nandalo sekoly ambony momba ny miaramila izy ireo, ary na ny fitaovana ampiasaina aza dia tokony hanana tombony lehibe ny miaramila, raha tsy hireseka afa-tsy ny fampiasana ny helikôptera. Na inona na inona mety ho fahaizan’ireo dahalo dia tsy tokony hanahirana ny mpitandro filaminana ny miady amin’izy ireo noho ny fahaizana sy ny fitaovana ampiasaina tsy mitovy. Sedra lehibe ho an’ny Tafika sy ny Zandarimariam-pirenena ity raharaha Lavaraty any Midongy Atsimo ity. Raha ny dahalo eto amintsika no tsy resin’izy ireo dia ahoana no afahana mandresy ny tafika avy any amin’ny firenen-kafa raha sanatria ka misy ny fanafihana an’i Madagasikara any aoriany any.